[Uphononongo] Sivavanye i-Totallee Case cover | IPhone iindaba
[Uphononongo] Ukuvavanya amatyala eTotallee
UAlex Vicente | | Ezahlukeneyo
Ndikwazile ukuvavanya ezimbini kumagqabi lawo Amatyala eTotallee Ithengisa kwiwebhusayithi yayo iintsuku ezimbalwa kwi-iPhone yam kwaye ndiza kukuxelela ukubonwa endinako kubo bonke ekusebenziseni i-iPhone yonke imihla. Amatyala akhethekileyo kwi-iPhone 6s Plus, kodwa kunjalo iyafumaneka nge-iPhone 6 / 6s kunye ne-5 / 5s Kananjalo kwaye kunjalo, sele benazo iinguqulelo ezikhoyo zeefowuni ezintsha zeApple, ifayile ye I-iPhone 7 kunye ne-7 Plus, apho ngaphandle kwekhamera eyahlukileyo, uyilo lulungelelanisa kakuhle kwizithuba ezitsha ezihlala kwisiphelo.
Ndikushiya ukuba ezi zikhava ziziphatha njani emva kweentsuku zokusebenzisa nganye nganye kwaye ke ngoko zikwazi ukuzivavanya kuzo zonke iimeko zemihla ngemihla.
3 Izimvo zoMhleli:
4 Inzuzo kunye nexabiso
5 Igalari yezithombe
Nje ukuba ufumane izigqubuthelo, ziza zipakishwe kwikhadibhodi apho kuthunyelwa khona (njengoko ndikubonisa kumfanekiso ophambili). Nje ukuba sivule le bhokisi, siyifumana iingxowa ezimbini ezimnyama (inye ikhava nganye) ngonxibelelwano oluthambileyo kwaye luhle kakhulu ngoonobumba abamhlophe. Ukongeza, babandakanya ikhadi lokubulela ngokuthenga kubandakanya Isiqinisekiso sokuba izigqubuthelo zineentsuku ezingama-90.
Amaqweqwe endikwazileyo ukuwa Isikhafu y I-Doberman, Igama elinikezwe kwityala le-Ultra Thin kunye ne-Thin ethengiswa yiTotallee kwiwebhusayithi yayo, okt.
Into yokuqala endichukumisileyo (kwaye ibaluleke kakhulu kum) yindlela abazinzileyo ngayo kwi-iPhone. Ukuba kunokwenzeka, ndichukunyiswe ngakumbi yi-Ultra Thin, kuba yindlela encinci ngayo, Kuyamangalisa ukuba ingena kakhulu kwiselfowuni. Ngokubhekisele kwimathiriyeli, imeko ye-Ultra Thin, eluhlaza okwesibhakabhaka kwimifanekiso yenziwe nge iplastikhi entle ngokwenene ngokuchukumisa okuphakathi, ngasemva okuthintela i-iPhone ekutyibilikeni; Okwangoku, ityala elincinci lenziwe irabha enzima, ukuze ikwazi ukufunxa ngcono ukubetha kwesixhobo sethu.
Zombini ezi zivalo zikuvumela ukuba usebenzise isandi kunye namaqhosha atshixwayo ngendlela entofontofo kwaye ngaphandle kokucinezela kakhulu ukuwacinezela, kodwa imeko eNgcono inengxaki ngeRinger (iqhosha lesimumu) kwaye Kunzima ukuyitshintsha ukusuka ekusebenzeni ukuya kokungasebenziyo kunye nokuphikisana. Oku kunciphisa inqanaba lesithethi kancinane ngokugubungela ezantsi i-iPhone, nangona kunjalo, oku phantse kuyinto encinci.
Ukugqitywa kwezembozo kulungile kakhulu, nangona kunjalo kwi-Ultra Thin, icala elingaphantsi leplastiki libukhali kakhulu kwaye inokuba buhlungu ukuba sibambe iselfowuni ngomnwe omncinci ukusuka ezantsi. Ukuphazamiseka kwimbono yam ngenxa yendlela endiyibambe ngayo ifowuni.
Ngokwam, ndiyithandile imeko ye-Ultra Thin, kodwa ayisiyakhelo eyenzelwe ukumelana nokothuka kodwa ukugubungela ukukrwela okungenziwa xa ubeka i-iPhone yakho kumphezulu. Ityala eli-Thin liwuzalisekisa ngokupheleleyo umsebenzi walo, ukukhusela kwizothuso kunye nokukwazi ukubeka i-iPhone phantsi ngaphandle kwescreen esichukumisa umphezulu, kodwa lityala elomeleleyo nelomeleleyo kunokuba kunciphisa ukuphathwa kwe-iPhone.
Zombini ezi zigubungelo zingathengwa kwiAmazon Spain, ngamaxabiso e- € 16,01 kwaye ziyafumaneka ngokuhambisa simahla kubathengi bePremiyamu.
ITotallee La Doberman (Thin)
Uphengululo lwe: UAlex Vicente
Iimathiriyeli: Izinto ezisemgangathweni ophezulu kuzo zombini. Le yindlela abavakalelwa ngayo ngaphandle kwebhokisi
Ubungqongqo: Ngokukodwa i-Ultra Thin, ibhitye engazange ndiyibone ngaphambili kwimeko.
Ukulungiswa: Omabini la matyala aqwalaselwe kakhulu kwi-iPhone ngaphandle kokubangela ukutyibilika okukruqulayo.
Uyilo: Iigophe zecala zilunge ngokugqibeleleyo kwiselfowuni. Abaphazamisi ukusebenza kwesithethi.
Ixabiso: Ngaphantsi kwe-17-19 yeedola kukho iindlela ezifanayo kwaye ngaphandle kokulinda ukuthunyelwa.
Gqibezela: Icala elingaphantsi kwe-Ultra Thin linokwenzakalisa, ngelinokugqitywa ngcono kuloo nxalenye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » [Uphononongo] Ukuvavanya amatyala eTotallee
Ngokwe-KGI i-iPhone 7 ayizukuthengisa kunye nee-6s
iCareFone, enye eya kwi-iTunes, isixhobo sokucoca kunye nokunye okuninzi kwi-iPhone yakho